स्टेट्सका लागि – डा. गोबिन्दसिंह रावत | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना कथा / लघुकथा कथा डबली स्टेट्सका लागि – डा. गोबिन्दसिंह रावत
on: आश्विन ७ , २०७८ बिहीबार- १०:१३
रमलाले फोन गरेर मिल्छ भने अहिल्यै नै घर आउनु पावनालाई लिन जानु पर्ने भयो भनेपछि मैले हुन्छ भनेर अफिसमा घरायसी कारण बताएर बिदा लिएँ । पार्किङ्ग लटमा आएर फेरी रमलालाई फोन गरेर म आफै गएर पावना र भावना दुवैलाई लिएर आउँछु नि भन्दा रमला मानिनन् । घर आउनु अनि सँगै जानु पर्छ । पावना मात्रै छोरी लिएर आउने हो भनेपछि मैले हुन्छ भनेर फोन राखिदिएँ ।
लगभग तीस वर्षकी भावना चार महिनाअघि कुनै सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकाको एरोजोना आएपछि अहिले दिदी भिनाजु पावना र प्रद्युम्नसँग यहीँ नै बस्दै आएकी छिन् । प्रद्युम्न र पावनासँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध थियो । पावनाप्रति प्रद्युम्नको माया अगाढ रहेको देखेर रमलाले कहिले काहीँ मलाई समेत ‘देख्यो प्रद्युम्नजी पावनालाई कति माया गर्नु हुन्छ’ भनेर उदाहरण दिने गर्थिन् । पावना र रमला पोखरामा स्कुलदेखिको साथी अनि काठमाडौं आएर दुवैले सँगै मेनेजमेन्ट पढेका थिए । बैंकको जागिर खादै गर्दा रमला अमेरिकामा एउटा टे«निङ्गमा भाग लिन आएपछि यहीँ कै भइन् र दुई वर्षपछि म पनि थपिएँ । पावनाको हकमा भने उनका श्रीमान प्रद्युम्न यहाँ आएका थिए । अनि यहाँ आएर स्थापित भएपछि पावनालाई बोलाएका थिए । शिकागोबाट चार वर्षअघि यहीँ सरेपछि रमला र पावनाका कारण हामीहरुका बीच आवत जावतले निरन्तरता पाउँदै जान थाल्यो । अझ भनौं एउटा पारीवारिक सम्बन्ध जस्तै भएको थियो ।
चार महिनाअघि अमेरिका आएकी भावनालाई पनि अमेरिका बस्ने विचार भएकोले यहाँको स्टेटस पाउने उपायहरु खोजिरहेको बारे मलाई पनि भनेकी थिइन् । भावना चिटिक्क परेकी राम्री थिइन् । राम्रीभन्दा पनि एकदम फिट भएर बस्ने भएकोले उनको सौन्दर्यता देखेर आकर्षित नहुने पुरुष विरलै होलान् । म पनि रमलाले पावनालाई लिन पठाउँदा भावनालाई पनि सँगै ल्याउन पाउने भएकोले तुरन्तै हुन्छ भनि हाल्थेँ । के गर्ने मर्दको मन न हो, मनभित्र एक प्रकारको काउकुती जस्तै हुँदोरहेछ । फेरि पावनालाई लिन जाँदा पावना आफ्नो दुई वर्षको छोरालाई कारसिटमा राखेर पछाडि नै बस्ने गर्थिन् भने भावना अगाडि मसँगै बसेर मीठा मीठा गफ हाक्दै मनोरञ्जन दिदै जाने भएकोले यात्राको बेग्लै मजा आउने ग¥थ्यो । त्यसमा पनि भावना मलाई ह्यण्डसम भिनाजु भनेर बोलाउने गरेकोले त्यसको अर्कै मज्जा आउने गथ्र्यो । त्यसैले त रमलाले पावनालाई लिन जानु पर्छ भन्दा भावनालाई पनि सँगै ल्याउन पाइन्छ भनेर अफिसबाट चाडै निस्कने तारतम्य पनि मिलाई छाडेँ ।
तर आज रमला पनि सँगै जाने र भावना नआउने भनेपछि मनमा खुल्दुली मच्चिन थाल्यो । रमलालाई भावना किन नआउने भनेर सोध्न पनि गाहे । भावना घरमा आउँदा उनीसँग वाइन पिउँदै गफ्फिनुको मजा पनि बेग्लै हुन्थ्यो । त्यसैले भावनाको सुखद उपस्थितिको कल्पना गर्दै म घर पुगेँ । घर पुगेपछि रमलालाई बाहिरैबाट फोन गरेर बाहिर निस्कन भन्दा रमलाले मलाई नै भित्र आउन भनेपछि मोटर पार्क गरेर म भित्र पसेँ ।
भित्र पस्नासाथ रमलाले भनेको कुरा सुनेपछि मलाई छानाबाट खसे जस्तो भयो । मुखबाट अचानक ‘हैट कस्तो बोर’ निस्केको सुनेपछि रमला मलाई हेर्दै, ‘के भनेको, के हो बूढा, तिमी पनि मलाई छोड्ने लाइनमा छौ कि क्या हो’ भनेर शब्द बाण हान्न थाली । मैले आफूलाई जोगाउँदै, त्यस्तो केही हैन, अचम्म लागेर पो, भनेर रमलालाई शान्त पार्दै हामी पावनाको घरतिर लाग्यौं ।
बाटोभरी मेरो मन मस्तिस्कमा भावनाको मुहार र रमलाले भर्खर सुनाएको कुराहरु घुमिरहेको थियो । प्रद्युम्न त खतरा रहेछन् जस्तो पनि लाग्यो । तर यो उनको भूल पनि हुन सक्छ । यसरी एउटी महिलाको लागि आफ्नो सुन्दर गृहस्थी कसरी ध्वस्त पार्न सकेका होलान् भन्ने पनि लाग्यो । मलाई भावनामाथि पनि रीस उठिरहेको थियो । विदेशमा आएर दिदीकै शरण पाएर बस्दै आएकी भावना आफ्नै दिदीको गृहस्थीमा आगो लगाएर हात सक्ने कस्तो स्वार्थी । प्रद्युम्नले पनि मौकाको फाइदा उठाएको मात्रै हो कि साँच्चै नै आफ्नो सालीलाई श्रीमतीको दर्जा दिने हो हेर्न बाँकी नै छ । फेरी प्रद्युम्नले भने बमोजिक गर्छ भन्ने के ग्यारन्टी छ त ? प्रद्युम्नले भावनालाई तिमीसँग बिहे गरेर अमेरिकाको स्टेट्स दिलाउँछु कसरी भन्न सक्या होला । अनि भावनाले एउटा स्टेट्स पाउन आफ्नै दिदीको घर बिगार्न कसरी सकेकी होली । उनीहरु बीच कहिलेदेखि त्यस्तो सम्बन्ध रहदै आएको रहेछ ? मोटरमा यस्तै यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेको थियो भने रमला पनि केही सोचिरहेको जस्तै गरी चुप लागेर बसेकी थिइन् ।
रातो बत्तीमा मोटर रोकिएपछि रमलाले हामी लोग्ने मान्छेको आनिबानिमाथि प्रहार गर्दै शब्दबाण हान्न थालिन्, लोग्ने मान्छेको जात त के भन्ने नि, छि ः । अलिकति पनि घर परिवारको नसोच्ने, जहाँ जस्तो पाए पनि इज्जतको ख्यालै नगरी लुत्रुक्क हुने । थुक्क ! मैले उसको अनुहारतिर हेर्न थालेँ, कतै मतिर फर्केर त थुक्क गर्या हैन ? हैन रहेछ । तर यसपटक भने मतिर फर्केर अचानक प्रश्न ते¥स्याई– क्या हो बूढा, भोलि मेरो बैनी कमला आई भने तिमी पनि कतै अमेरिकाको स्टेटस दिलाइदिन्छु भनेर त्यस्तै गर्ने त हैनौं ?
कमला मान्ली र ? मुखबाट फ्याट्ट निस्कियो । अनि तुरन्त जिस्केको, जिस्केको है भनेर प्रसङ्ग मोड्न खोजेको मात्र के थिएँ । रमला आफै भन्न थाली – मलाई त केही मतलब छैन बूढा, जहाँ जाऊँ, जोसँग मरे पनि मर । यस्तो थाहा पाउनासाथ म त मरिगए फेरि तिम्रो मुख हेर्दिनँ । थुक्क लोग्ने मान्छे, फेरि सराप्न थाली, तर मैले बीचमा नै रमलाको कुरा काट्दै प्रद्युम्नको वकालात गरेझैँ गरी भनेँ– यसमा भावनाको पनि त बराबरी दोष छ नि । प्रद्युम्नले भन्दैमा मान्ने हो त ? भावनालाई अमेरिकामा बस्नु पर्ने, प्रद्युम्नले म सब मिलाई दिन्छु भनेर आफ्नो इच्छा पुरा गर्दै गयो होला अनि भावना पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न दिदीकै अधिकार खोस्दै गएको हैन त ? भावनालाई अमेरिकामा बस्ने स्टेटस् चाहिएको थियो । त्यो स्टेटस घरबाटै पाउने देखपछि उनले यस्तो गरेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई । नेपालबाट अमेरिका–क्यानडा आउन बिस–तीस लाख तिरेको सुन्दै आएको थिए । त्यसैले स्टेटस पाउन भावनाले प्रद्युम्नलाई रिझाएको पनि हुन सक्छ । यसमा पुरुष मात्रै हैन महिला पनि दोषी हो । मैले पनि आफु पुरुष भएको देखाउँदै भनिदिएँ ।
फरक यतिमात्रै हो कि मैले छिः र थुक्कः भन्न सकिनँ । आटै आएन । किनभने अर्काको घरमा सल्केको आगोले बिनसित्तिमा हाम्रो घरलाई पनि समात्न खोज्दै थियो । स्वास्नी मान्छेको बिना कारण गर्ने शंका र लोग्ने मान्छेको परस्त्रीप्रतिको व्यवहार कहिल्यै रोकिदैन । अमेरिकाको स्टेटस लिन मान्छेहरु जे पनि गर्न तयार हुन्छन् है ! मात्र के भनेको थिएँ रमलाले चुप लागेर मोटर हाँक भनेको सुनेँ । अनि आज्ञाकारी भएर मोटर कुदाउँदै भावना अर्थात पावनाको घर पुग्यौं ।
भित्र पस्नासाथ पावनाले चारवटा सुटकेस देखाउँदै एउटा सुटकेस बोकेर डिकी खोली दिन आग्रह गरिन् । रमलाले हात र आँखाबाट इशारा गर्दै, उनीहरु खोइ भनेर सोधी । पावनाले मुखैबाट छैनन् भन्दै सुटकेस भुईंमा राख्दै रमलालाई अँगालो मारेर रुदै आज बिहानमात्र थाहा पाएँ भन्दै भन्न थाली, ‘बिहान बूढा काममा जान्छु भनेर निस्केको थियो । म छोरालाई खुवाइवरी सुताएर भान्सातिर जाँदै थिएँ । तर बूढालाई भावनाको कोठाबाट निस्किदै गरेको देखेँ । मलाई देख्ना साथ ऊ तुरन्तै भावनाको कोठामा पस्न खोज्दा म पनि जबरजस्ती कोठाभित्र पसेर कराउन थालेँ ।’ मैले भावनालाई तुरन्तै घरबाट निस्केर जा भनेर उसको ब्लेङ्केट तानेर फाल्न खोज्दा उसलाई निर्वस्त्र देखेपछि म फेरी ऊमाथि खनिदै हात हाल्न पुगेछु । अनि त कहिल्यै हात नउँठाएको प्रद्युम्नले ममाथि हातै चलाएर पिट्न थाल्यो । उसले मलाई चिच्चाएर, त निस्केर गइहाल । अब तेरो र मेरो कुनै सम्बन्ध रहेन । कानूनी रुपमा जे गर्नु पर्छ म गरुला सहुला र तपाई आजैको मितिदेखि छोडेको घोषणा गरेर भावनासँग बिहे गर्ने जानकारी पनि तलाई दिए भनेर मलाई समातेर घिसार्दै कोठाबाट बाहिर निकालेपछि म आफ्नो कोठामा आएँ । त्यसपछि तिमीलाई फोन गरेर बोलाएको हो ।
पावनाले सुनाएको कुराहरु चलचित्रको दृश्यजस्तै मेरो अघिल्तिर आइरहेको थियो । रमलाले पावनालाई ढाढस दिदै सबै ठिक हुन्छ । यो अमेरिकाको यहाँ रोएर बस्ने हैन । चुप लागेर हिँड, भन्दै हामी पावनाको सुत्केसहरु राख्न थाल्यौं । अनि छोरालाई बोकेर पावना पनि मोटरमा आएर बसी ।
इ‌ङ्नामलाई मदन पुरस्कार, थापालाई जगदम्बाश्री